ဒီတပတျ ဒီဗှီဘီရဲ့ Movie Crazy – DVB အစီအစဉျမှာ ရုပျရှငျဝါသနာအိုးတှေ အတှကျ ပုံမှနျတငျဆကျနကွေဖွဈတဲ့ နိုငျငံတကာနဲ့ ပွညျတှငျးက ကောငျးနိုးရာရာ ရုပျရှငျဇာတျကားတှကေို ရှေးခယျြဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို ပထမဆုံးမိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ရနျကုနျ မွို့လယျခေါငျ သနေတျပဈဖောကျခှဲခနျးတှေ ပါဝငျတဲ့ ဟောငျကောငျရုပျရှငျကား-Line Walker 2: Invisible Spy !
ဟောငျကောငျအခွစေိုကျ Shaw Brother Pictures က စီစဉျရိုကျကူးတဲ့ ဒီရုပျရှငျ ကားကိုတော့ ဟောငျကောငျရုပျရှငျဒါရိုကျတာ Jazz Boon က ရိုကျကူးပုံဖျော ပေးထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံတကာ အကွမျးဖကျသမားတှပေါဝငျတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတခုနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ရဲမှုး Yip နဲ့ စုံထောကျ Ching တို့ဟာ Yiu ဆိုတဲ့ Hacker တယောကျကို ဖမျးမိရာကနေ ရဲဝနျထမျးနှဈယောကျကို သူလြှိုတှအေဖွဈ သံသယဖွဈစရာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ သဲ လှနျစတှနေောကျကို လိုကျရငျးကနေ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ စပိနျကိုရောကျနတေဲ့ ရဲစုံထောကျ ၃ ယောကျဆီ ရောကျလာကွပွီး စုံစမျးရှာဖှခြေိနျမှာတော့ ဘယျသူက လူဆိုး၊ ဘယျသူက လူကောငျးဆိုတာ ဝဝေဝါးဝါး ဖွဈလာရတဲ့အခါ ဘာတှဖွေဈလာမလဲဆိုတာတှကေို အ ပဈအခတျအကျရှငျဇာတျဝငျခနျးတှနေဲ့ ရှုစားကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာတော့ ဟောငျကောငျသရုပျဆောငျ မငျးသားတှဖွေဈကွတဲ့ Louis Koo ၊ Nick Cheung ၊ Francis Ng ၊ Johnny Melville စတဲ့ သရုပျဆောငျတှေ ခေါငျး ဆောငျပါဝငျထားကွပွီး မွနျမာနိုငျငံက သရုပျဆောငျမငျးသားတှေ ဖွဈကွတဲ့ အောငျမွငျ့ မွတျ၊ လငျးအောငျခတျေစတဲ့ သရုပျဆောငျတှလေညျး ပါဝငျခဲ့တာပါ။
ကွာမွငျ့ခြိနျ ၉၈ မိနဈရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လာမယျ့ သွ ဂုတျလ ၈ ရကျနမှေ့ာ စတငျပွီး ရုံတငျပွသသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို နောကျထပျ မိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ Hollywood Family Adventure ရုပျရှငျကားတကားဖွဈတဲ့ Dora and the Lost City of Gold !
ဒီကားကိုတော့ နာမညျကွီး ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးကုမ်ပဏီတခုဖွဈတဲ့ Paramount Pictures က တငျဆကျလိုကျတာဖွဈပွီး ဗွိတိနျ ရုပျရှငျဒါရိုကျတာ James Bobin က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒိုရာလို့ ကွားလိုကျတာနဲ့ ပရိသတျတှကေ ငယျဘဝဇာတျကောငျ ဒိုရာဆိုတဲ့ ၇ နှဈ အရှယျ ကာတှနျးဇာတျကောငျ ကောငျမလေးတယောကျကို ပွေးမွငျမိကွမှာပါ။ Dora The Explorer အမညျနဲ့ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈမှာ စတငျထုတျလှငျ့ခဲ့ပွီး ပရိသတျတှေ အား ပေးလကျခံခဲ့ကွတဲ့ နာမညျကွီး အမရေိကနျ ရုပျသံစီးရီးကို Live Action အနနေဲ့ အ သကျသှငျးပုံဖျောရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာတော့ ဒိုရာကို အထကျတနျးကြောငျး သူ ဆယျကြျောသကျကောငျမလေးအဖွဈ ပွနျလညျမွငျတှရေ့မှာပါ။ လလေ့ာရေးထှကျ ရငျး ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ မိဘတှကေို ကယျတငျဖို့ သူ့ရဲ့ အခဈြတျော မြောကျကလေး Boots ၊ တခွားသူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ Inca ရှမွေို့တျောကွီးဆီ စှနျ့ စားခနျးထှကျကွတာတှကေို ဒီကားထဲမှာ ပရိသတျတှကေ ရှုစားကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားထဲက အဓိက ဇာတျကောငျ Dora နရောမှာတော့ အမရေိကနျ ဆယျ ကြျောသကျ သရုပျဆောငျမငျးသမီး Isabela Moner က ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားပွီး တ ခွားဟောလိဝုဒျသရုပျဆောငျတှေ ဖွဈကွတဲ့ Eugenio Derbez ၊ Michael Peña ၊ Eva Longoria တို့ကလညျး ပါဝငျထားခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ နာမညျကွီး အသံသရုပျဆောငျ မငျးသား Danny Trejo ကတော့ မြောကျကလေး Boots အဖွဈ အသံနဲ့ ပါဝငျသရုပျ ဆောငျထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
သွစတေးလနြိုငျငံ၊ Gold Coast ၊ Queensland စတဲ့ ဒသေတှမှော ရိုကျကူးထား ခဲ့တဲ့ ဒီရုပျရှငျကား Trailer ဟာ ယူကြုဘျပျေါမှာတော့ လတျတလောအခြိနျထိ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှုကွတဲ့ အကွိမျရေ ၂၇ သနျးနီးပါး ရှိနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ တခြို့ဇာတျဝငျခနျး မွငျကှငျးတှေ၊ ပွကှငျးပွကှကျတှေ၊ ပွော စကား Dialog တှကေ ကလေးတှေ ကွညျ့ရှုဖို့ မသငျ့တျောတာမို့ ဒီကားကို ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ မိဘအုပျထိနျးသူခှငျ့ပွုခကျြ Guideline နဲ့မှ ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ PG အဆငျ့ သတျမှတျထားပါတယျ။
ကွာမွငျ့ခြိနျ ၁၀၂ မိနဈရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ လာမယျ့ သွဂုတျလ ၉ ရကျနေ့ မှာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျမိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ နတေိုးအပါအဝငျ နာမညျ ကွီး သရုပျဆောငျတှေ အမြားကွီး ပါဝငျထားကွတဲ့ မွနျမာရုပျရှငျ-နိုငျငံကွီးသား !
ဒီကားကိုတော့ အားမာနျရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက တငျဆကျလိုကျတာဖွဈပွီး မောငျမွတျဆှရေဲ့ ဇာတျညှနျးကို ဒါရိုကျတာ စတီးလျက ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာတော့ လတျတလောအခွအေနတှေကေို ထငျဟပျပွသနတေဲ့ တကယျအမှားလုပျနတေဲ့သူတှကေို ဆှဲထုတျပွီး အမှနျတရားကို ဖျောထုတျပွသဖို့၊ ဥပဒေ အထကျမှာ ဘယျသူမှ မရှိစရေဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး ဘယျလို ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှနေဲ့ ပုံဖျောဖနျတီးထားမလဲဆိုတာကို ပရိသတျတှကေ စောငျ့မြှျောအားပေးကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာ ပရိသတျအခဈြတျော သရုပျဆောငျမငျးသား နတေိုးနဲ့အတူ တခွားနာ မညျကွီးသရုပျဆောငျမငျးသားမငျးသမီးတှေ ဖွဈကွတဲ့ မငျးမျောကှနျး၊ ထှနျးထှနျး၊ နေ ထကျလငျး၊ ရှသေမီး၊ အျောနျဆိုငျးစတဲ့ သရုပျဆောငျတှအေပွငျ တခွားသရုပျဆောငျ တှလေညျး အမြားကွီး ပါဝငျအားဖွညျ့ထားကွတာပါ။
နိုငျငံကွီးသားရုပျရှငျကားရဲ့ အထူးပှဲပွသမှုကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလ ၅ ရကျနေ့ က ရနျကုနျမွို့၊ သမ်မတ ရုပျရှငျရုံမှာ ပွုလုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကား Trailer ဟာ လတျတလောမှာတော့ ဖစျေ့ဘှတျချပျေါမှာ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှုကွတဲ့ အကွိမျရေ ၂ သနျးခှဲကြျော ရှိနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားကိုတော့ လာမယျ့ သွဂုတျလ ၈ ရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါ တယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို နောကျထပျမိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ သှေး ပကျြထိတျလနျ့စရာ ဇာတျဝငျခနျးတှနေဲ့ ရှုစားကွရမယျ့ Scary Stories to Tell in the Dark !
Horror Mystery Thriller အမြိုးအစား ရုပျရှငျကားတကားဖွဈတဲ့ ဒီကားကိုတော့ နျောဝေးရုပျရှငျဒါရိုကျတာ André Øvredal က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာဖွဈပွီး Lionsgate ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက တငျဆကျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကတော့ အမရေိကနျ စာရေးဆရာဂြာနယျလဈ Alvin Schwartz ရဲ့ ဒီနာမညျနဲ့ပဲ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ကလေးစာအုပျစီးရီးတှကေို အခွခေံပွီး ရုပျရှငျအနနေဲ့ အသကျ သှငျးပုံဖျောဖနျတီးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
၁၉၆၈ ခုနှဈကာလဝနျးကငျြ၊ Mill Valley မွို့ငယျလေးရဲ့ အစှနျက Bellows မိ သားစုရဲ့စံအိမျအိုကွီးထဲက Sarah ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးတယောကျရေးထားတဲ့ ကွောကျ စရာပုံပွငျတှကေို ဆယျကြျောသကျလူငယျတစုက ဖတျမိသှားခြိနျမှာတော့ ထူးဆနျးတဲ့ အခွအေနတှေအေဖွဈ ပွောငျးလဲသှားခဲ့ပါတော့တယျ။ အဲဒီစာအုပျထဲမှာ သူတို့ နာမညျတှေ ပါဝငျနပွေီး ပုံပွငျထဲကအတိုငျး အပွငျမှာလညျး သှေးပကျြခြောကျခြားစရာ အဖွဈအပကျြတှေ၊ အန်တရာယျတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့ခြိနျမှာတော့ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲ။ ဒီအခွအေနကွေားကနေ သူတို့ လှတျမွောကျနိုငျပါ့မလားဆိုတာတှကေို ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ရှုစားကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာတော့ လူငယျသရုပျဆောငျတှဖွေဈကွတဲ့ Zoe Colletti ၊ Michael Garza ၊ Gabriel Rush ၊ Austin Abrams တို့နဲ့အတူ ဝါရငျ့ဟောလိဝုဒျသရုပျဆောငျတှေ ဖွဈကွတဲ့ Dean Norris ၊ Gil Bellows နဲ့ Lorraine Toussaint တို့ ကလညျး ပါဝငျထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ယူကြုဘျပျေါမှာတော့ ဒီရုပျရှငျကား Trailer ကို လတျတလောအခြိနျထိ ဝငျ ရောကျကွညျ့ရှုကွတဲ့ အကွိမျရေ ၈ သနျးနီးပါး ရှိနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ကွမျးတမျးတဲ့ တိုကျခိုကျမှုတှေ၊ ပွကှငျးပွကှကျတှေ၊ သှေး ပကျြထိတျလနျ့စရာကောငျးတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးတှေ၊ ပွောစကား Dialog တှကေ အသကျ ၁၃ နှဈအောကျ ကလေးငယျတှေ ကွညျ့ရှုဖို့ မသငျ့တျောတာမို့ ဒီကားကို ကွညျ့မယျဆို ရငျတော့ မိဘအုပျထိနျးသူခှငျ့ပွုခကျြ Guideline နဲ့မှ ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ PG-13 အဆငျ့ သတျမှတျထားပါတယျ။
ကွာမွငျ့ခြိနျ ၁၁၁ မိနဈရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ လာမယျ့ သွဂုတျလ ၉ ရကျနမှေ့ာ စတငျပွီး ရုံတငျပွသသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို နောကျဆုံးမိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး မွနျမာအခဈြဟာသရုပျရှငျ ပရိသတျတှေ အကွိုကျတှကွေ့မယျ့ ပုရိသ !
ဒီကားကိုတော့ စိနျဌေးရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက တငျဆကျလိုကျတာဖွဈပွီး ပနျးခြီ ရှအေေးကိုရဲ့ ဇာတျလမျးကို ဒါရိုကျတာ ကိုဇျော(အရုဏျဦး)က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာတော့ ခုနောကျပိုငျး ရုပျရှငျကားတှမှော ခပျစိပျစိပျတှလေ့ာရတဲ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ခိုငျသငျးကွညျနဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသမီးသဈ နခွေညျဦးတို့ အပွိုငျခေါငျးဆောငျပါဝငျထားကွတာဖွဈပွီး သူတို့ ၂ ယောကျကို ပရိသတျတှကေ အပြို ကွီး ထကျမွငျ့မိုရျနဲ့ အပြိုလေး ကောငျးကငျပွာအနနေဲ့ ရှုစားကွရမှာဖွဈပါတယျ။ အကောငျးတကာ့အကောငျးဆုံး ယောကျြားကိုမှ ခေါငျးခေါကျရှေးခယျြကွမယျ့ သူတို့ ၂ ယောကျနဲ့ ပတျသကျဆကျနှယျလာကွမယျ့ အမြိုးသားတှကွေားက အဖွဈအပကျြတှကေို အခဈြ၊ ဟာသဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှနေဲ့ ပုံဖျောရိုကျကူးထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာတော့ ခိုငျသငျးကွညျ၊ နခွေညျဦးတို့နဲ့အတူ တခွားသရုပျဆောငျမငျး သားတှဖွေဈကွတဲ့ ကြျောရဲအောငျ၊ ရဲအောငျ၊ ထကျအောငျသြှိုငျး၊ တိုငျရှနျ၊ ခမျြးမငျးရဲ ထှဋျစတဲ့ သရုပျဆောငျတှလေညျး အမြားကွီး ပါဝငျထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ပုရိသရုပျရှငျကားရဲ့ အထူးပှဲပွသမှုကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလ ၁ ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့၊ Junction City ရုပျရှငျရုံမှာ ပွုလုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကား Trailer ဟာ ဖစျေ့ဘှတျချပျေါမှာတော့ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုကွတဲ့ အ ကွိမျရေ ၂ သနျးကြျော ရှိနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Movie Crazy-DVB အစီအစဉျကို အပတျစဉျ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ညတိုငျး ၇.၄၅ နာရီ၊ ၁၀.၄၅ နာရီတှမှော DVB TV channel ကနေ ပုံမှနျတငျဆကျပေးနတောဖွဈပွီး မ ကွညျ့ရှုလိုကျရသူတှအေတှကျ ကွာသပတေးနမေ့နကျ ၉.၁၅ နာရီ၊ နလေ့ယျ ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅ နာရီ၊ သောကွာနေ့ နလေ့ညျ ၂.၄၅ နာရီ၊ စနနေေ့ မနကျ ၁၁.၄၅ နာရီနဲ့ တ နင်ျလာနမေ့နကျ ၉.၄၅ နာရီတို့မှာ ပွနျလညျထုတျလှငျ့ပွသပေးနတော ဖွဈပါတယျ။
ဒီအစီအစဉျမှာ Movie Crazy တှအေတှကျ နိုငျငံတကာနဲ့ မွနျမာရုပျရှငျကား တှေ အကွောငျးကို ကောငျးနိုးရာရာ ရှေးခယျြတငျဆကျပေးနတောဖွဈပွီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမကျြနှာကနတေဆငျ့လညျး Like, Share နဲ့ Comment တှပေေးပွီးတော့ အားပေးနိုငျပါတယျ။
ဒီတပတ် ဒီဗွီဘီရဲ့ Movie Crazy – DVB အစီအစဉ်မှာ ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတွေ အတွက် ပုံမှန်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းက ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ရန်ကုန် မြို့လယ်ခေါင် သေနတ်ပစ်ဖောက်ခွဲခန်းတွေ ပါဝင်တဲ့ ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ကား-Line Walker 2: Invisible Spy !
ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် Shaw Brother Pictures က စီစဉ်ရိုက်ကူးတဲ့ ဒီရုပ်ရှင် ကားကိုတော့ ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Jazz Boon က ရိုက်ကူးပုံဖော် ပေးထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်သမားတွေပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရဲမှုး Yip နဲ့ စုံထောက် Ching တို့ဟာ Yiu ဆိုတဲ့ Hacker တယောက်ကို ဖမ်းမိရာကနေ ရဲဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကို သူလျှိုတွေအဖြစ် သံသယဖြစ်စရာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ သဲ လွန်စတွေနောက်ကို လိုက်ရင်းကနေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စပိန်ကိုရောက်နေတဲ့ ရဲစုံထောက် ၃ ယောက်ဆီ ရောက်လာကြပြီး စုံစမ်းရှာဖွေချိန်မှာတော့ ဘယ်သူက လူဆိုး၊ ဘယ်သူက လူကောင်းဆိုတာ ဝေဝေဝါးဝါး ဖြစ်လာရတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေကို အ ပစ်အခတ်အက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ဟောင်ကောင်သရုပ်ဆောင် မင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Louis Koo ၊ Nick Cheung ၊ Francis Ng ၊ Johnny Melville စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ ခေါင်း ဆောင်ပါဝင်ထားကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံက သရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အောင်မြင့် မြတ်၊ လင်းအောင်ခေတ်စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ခဲ့တာပါ။
ကြာမြင့်ချိန် ၉၈ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမယ့် သြ ဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး ရုံတင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ Hollywood Family Adventure ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ Dora and the Lost City of Gold !
ဒီကားကိုတော့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ Paramount Pictures က တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ဗြိတိန် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ James Bobin က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုရာလို့ ကြားလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေက ငယ်ဘဝဇာတ်ကောင် ဒိုရာဆိုတဲ့ ၇ နှစ် အရွယ် ကာတွန်းဇာတ်ကောင် ကောင်မလေးတယောက်ကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ Dora The Explorer အမည်နဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေ အား ပေးလက်ခံခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီး အမေရိကန် ရုပ်သံစီးရီးကို Live Action အနေနဲ့ အ သက်သွင်းပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ဒိုရာကို အထက်တန်းကျောင်း သူ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးအဖြစ် ပြန်လည်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ လေ့လာရေးထွက် ရင်း ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မိဘတွေကို ကယ်တင်ဖို့ သူ့ရဲ့ အချစ်တော် မျောက်ကလေး Boots ၊ တခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Inca ရွှေမြို့တော်ကြီးဆီ စွန့် စားခန်းထွက်ကြတာတွေကို ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲက အဓိက ဇာတ်ကောင် Dora နေရာမှာတော့ အမေရိကန် ဆယ် ကျော်သက် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Isabela Moner က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီး တ ခြားဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Eugenio Derbez ၊ Michael Peña ၊ Eva Longoria တို့ကလည်း ပါဝင်ထားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး အသံသရုပ်ဆောင် မင်းသား Danny Trejo ကတော့ မျောက်ကလေး Boots အဖြစ် အသံနဲ့ ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ Gold Coast ၊ Queensland စတဲ့ ဒေသတွေမှာ ရိုက်ကူးထား ခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ ယူကျုဘ်ပေါ်မှာတော့ လတ်တလောအချိန်ထိ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၂၇ သန်းနီးပါး ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်း မြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေ၊ ပြော စကား Dialog တွေက ကလေးတွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၁၀၂ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ နေတိုးအပါအဝင် နာမည် ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေ အများကြီး ပါဝင်ထားကြတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်-နိုင်ငံကြီးသား !
ဒီကားကိုတော့ အားမာန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး မောင်မြတ်ဆွေရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို ဒါရိုက်တာ စတီးလ်က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ လတ်တလောအခြေအနေတွေကို ထင်ဟပ်ပြသနေတဲ့ တကယ်အမှားလုပ်နေတဲ့သူတွေကို ဆွဲထုတ်ပြီး အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပြသဖို့၊ ဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဘယ်လို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ပုံဖော်ဖန်တီးထားမလဲဆိုတာကို ပရိသတ်တွေက စောင့်မျှော်အားပေးကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသား နေတိုးနဲ့အတူ တခြားနာ မည်ကြီးသရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း၊ နေ ထက်လင်း၊ ရွှေသမီး၊ အော်န်ဆိုင်းစတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေအပြင် တခြားသရုပ်ဆောင် တွေလည်း အများကြီး ပါဝင်အားဖြည့်ထားကြတာပါ။
နိုင်ငံကြီးသားရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့၊ သမ္မတ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ လတ်တလောမှာတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၂ သန်းခွဲကျော် ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ သွေး ပျက်ထိတ်လန့်စရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ ရှုစားကြရမယ့် Scary Stories to Tell in the Dark !
Horror Mystery Thriller အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီကားကိုတော့ နော်ဝေးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ André Øvredal က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Lionsgate ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ အမေရိကန် စာရေးဆရာဂျာနယ်လစ် Alvin Schwartz ရဲ့ ဒီနာမည်နဲ့ပဲ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကလေးစာအုပ်စီးရီးတွေကို အခြေခံပြီး ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ အသက် သွင်းပုံဖော်ဖန်တီးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်ကာလဝန်းကျင်၊ Mill Valley မြို့ငယ်လေးရဲ့ အစွန်က Bellows မိ သားစုရဲ့စံအိမ်အိုကြီးထဲက Sarah ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ရေးထားတဲ့ ကြောက် စရာပုံပြင်တွေကို ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစုက ဖတ်မိသွားချိန်မှာတော့ ထူးဆန်းတဲ့ အခြေအနေတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ သူတို့ နာမည်တွေ ပါဝင်နေပြီး ပုံပြင်ထဲကအတိုင်း အပြင်မှာလည်း သွေးပျက်ချောက်ချားစရာ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ အန္တရာယ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရချိန်မှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ ဒီအခြေအနေကြားကနေ သူတို့ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာတွေကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ လူငယ်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Zoe Colletti ၊ Michael Garza ၊ Gabriel Rush ၊ Austin Abrams တို့နဲ့အတူ ဝါရင့်ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Dean Norris ၊ Gil Bellows နဲ့ Lorraine Toussaint တို့ ကလည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယူကျုဘ်ပေါ်မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ကို လတ်တလောအချိန်ထိ ဝင် ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၈ သန်းနီးပါး ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေ၊ သွေး ပျက်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆို ရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၁၁၁ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး ရုံတင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး မြန်မာအချစ်ဟာသရုပ်ရှင် ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြမယ့် ပုရိသ !
ဒီကားကိုတော့ စိန်ဌေးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ပန်းချီ ရွှေအေးကိုရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဒါရိုက်တာ ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ခုနောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ခပ်စိပ်စိပ်တွေ့လာရတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ခိုင်သင်းကြည်နဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးသစ် နေခြည်ဦးတို့ အပြိုင်ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့ ၂ ယောက်ကို ပရိသတ်တွေက အပျို ကြီး ထက်မြင့်မိုရ်နဲ့ အပျိုလေး ကောင်းကင်ပြာအနေနဲ့ ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး ယောကျာ်းကိုမှ ခေါင်းခေါက်ရွေးချယ်ကြမယ့် သူတို့ ၂ ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်လာကြမယ့် အမျိုးသားတွေကြားက အဖြစ်အပျက်တွေကို အချစ်၊ ဟာသဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ခိုင်သင်းကြည်၊ နေခြည်ဦးတို့နဲ့အတူ တခြားသရုပ်ဆောင်မင်း သားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကျော်ရဲအောင်၊ ရဲအောင်၊ ထက်အောင်သျှိုင်း၊ တိုင်ရွန်၊ ချမ်းမင်းရဲ ထွဋ်စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်း အများကြီး ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုရိသရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ Junction City ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာတော့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အ ကြိမ်ရေ ၂ သန်းကျော် ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Movie Crazy-DVB အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညတိုင်း ၇.၄၅ နာရီ၊ ၁၀.၄၅ နာရီတွေမှာ DVB TV channel ကနေ ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး မ ကြည့်ရှုလိုက်ရသူတွေအတွက် ကြာသပတေးနေ့မနက် ၉.၁၅ နာရီ၊ နေ့လယ် ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅ နာရီ၊ သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂.၄၅ နာရီ၊ စနေနေ့ မနက် ၁၁.၄၅ နာရီနဲ့ တ နင်္လာနေ့မနက် ၉.၄၅ နာရီတို့မှာ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ Movie Crazy တွေအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကား တွေ အကြောင်းကို ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်လည်း Like, Share နဲ့ Comment တွေပေးပြီးတော့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။
Previous story သပိတျစခနျး ပဈခတျဖွိုခှဲခံရသညျ့ မွို့တျောခနျးမရှေ့ ရှဈလေးလုံးအရေးတျောပုံနေ့ ပထမဆုံး ကငျြးပခှငျ့ရ
Next story ရှစေကျတျော ဘေးမဲ့တောမှ ရှားပါးကွယျလိပျ ကောငျရေ ၃၅၀ ကြျော အသအေပြောကျဖွဈပျေါ